Taorian’ny fihainoana ireo voampanga dia namoaka didy savaranonando ny CPAC, koa dia nahazo fahafahana vonjimaika tamin’ity raharaha ity ilay ramatoa mpandraharaha, mpikambana ao amin’ny antoko HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) isan’ny tanan-kavanan’ny filoham-pirenena, raha toa ka notazomina am-ponja vonjimaika ilay tomponandraikitra misahana ny tsenan’asam-panjakana eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena.
Loharanom-baovao avy amina mpanao politika akaiky ity mpandraharaha ity no nilaza fa tsy misy idiran-dRtoa Claudine Razaimamonjy tamin’io asa io, satria sady tsy misoratra aminy no tsy nanao “engagement” mikasika izany rahateo izy.
Tamin’ny 03 aprily 2017 no nosamborin’ny Bianco teny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina Rtoa Claudine Razaimamonjy, raha iny avy nijery baolina basikety nandraisan’ny kliobany anjara iny. Kolikoly manodidina ny tsenan’asam-panjakana tany Ambohimahamasina-Ambalavao Tsienimparihy no niandohan’ny raharaha.
Notanana hatao fanadihadiana teny amin’ny foiben-toeran’ny Bianco teny Ambohibao izy, avy eo natolotra ny CPAC ny 7 aprily 2017. Nanangan-torana rehefa nivoaka ny didy savaranonando fa miditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora izy ny harivan’io andro io. Tsy nandingana ity fonja ity na dia iray minitra anefa Rtoa Claudine Razaimamonjy fa navantana avy hatrany tao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha. Avy eo nalefa tatsy amin’ny Nosy Maorisy nanao fitarafana ny fototry ny aretiny. Rehefa niverina dia mbola nandalo hopitaly, vao teny Antanimora avy eo nafindra tao amin’ny fonjan’i Manjakandriana.
Nanamafy ny Tale jeneralin’ny Bianco taorian’io fa misy raharaha efatra, farafahakeliny miandry an’ity mpandraharaha ity, anisany ity niakatra Fitsarana androany ity.
Midika izany fa mbola voatana amponja vonjy maika aloha Rtoa Claudine Razaimamonjy, tamin'ny dosie teo aloha, izay mbola tsy vita.